समुद्रमा डुबेर अष्ट्रेलियामा नेपाली विद्यार्थीको निधन ! – Voice Samachar
मुख्य पृष्ठ /News/समुद्रमा डुबेर अष्ट्रेलियामा नेपाली विद्यार्थीको निधन !
समुद्रमा डुबेर अष्ट्रेलियामा नेपाली विद्यार्थीको निधन !
899 Less thanaminute
काठमाडौँ । अष्ट्रेलियामा समुद्रमा डुबेर एक नेपाली विद्यार्थीको ज्या’न गएको छ। क्विन्सल्याण्ड राज्यको समुद्रमा डु’बेर पोखरा स्थायी घर भएका निकेस श्रेष्ठको ज्या’न गएको हो। बुधबार दिउँसो पौडी खेल्ने क्रममा निकेसलाई छालले बगाएको थियो । बुधबार ब्रिसबेन नजिकैको स्ट्राटब्रुक आईल्याण्डमा रहेको समुद्र किनारमा पौडी खेल्ने क्रममा उनको निधन भएको हो ।
छालमा बगेर बेपत्ता भएपछि उनीसँगै पौडी खेलिरहेका साथीहरूले उद्धारकर्मीलाई सम्पर्क गरेका थिए। उद्धारकर्मीले ५ मिनेटपछि किनारबाट २ सय मिटर पर तैरिरहेको अवस्थामा निकेसको श’व भेटाएको थियो ।
मृ’तक श्रेष्ठको श’वलाई घटनास्थल नजिकै राखिएको छ । यस घटनाबारे हिजो साँझदेखि खबर आउन शुरु भएपनि आज बिहान मात्रै नेपाली दुताबास क्यानबेरा र एन आर एन अष्ट्रेलिया लगायत सम्बन्धित निकाय र समुदायमा खबर पुगेको छ ।
मृ’तक श्रेष्ठको श’व भोली बिहान ब्रिसबेन ल्याइने र नेपाल पठाउने प्रक्रिया पुरा हुन अरु १०–८ दिन लाग्न सक्ने बताइएको छ । उक्त श’व नेपाल पठाउने कार्यमा एन आर एनका पदाधिकारीहरु अमृत खत्री, शम्भु गैसे, अतुल खड्का, पत्रकार सरल गुरुङ खटिएका छन् ।
मृ’तक श्रेष्ठ अध्ययन गर्ने विश्वबिद्यालयमा यो घटना जानकारी भइसकेको र त्यहाँ बाट पनि आवश्यक सहयोग र समन्वय प्राप्त हुने बताइएको छ । थप विवरण आउन बाँकी छ ।
फेरि आज पनि ह्वात्तै घट्यो सुनको मूल्य
मलेसियामा एक फर्निचर कम्पनीमा कार्यरत नेपालीको काठले च्यपिएर मृत्यु